US Kutenga mikombe yenzou kubva kuZimbabwe neZambia
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Nhau Nhau » US Kutenga mikombe yenzou kubva kuZimbabwe neZambia
Nhau Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Zimbabwe Breaking News • Zimbabwe Breaking News
Iyo World Animal Dziviriro mukupindura kuUS department reImukati. Chirevo ichi chiri maererano neUnited States kubvumidza kutengwa kwemikombe yenzou kubva kuZimbabwe neZambia, kudzosera kurambidzwa kwayo pasi pehutongi hwaObama.
“Tinoshamiswa nedanho rakatorwa nebazi rezvemukati menyika rekubvumidza kutengwa kwemikombe yenzou kubva kuZimbabwe neZambia. Kuvhima trophy kunokonzeresa, kutambura kukuru kwenzou nemafuta zvinoda zvigadzirwa zvemhuka dzesango, kuvhura musuwo wekushandisa zvakare.
IAmerica inofanirwa kuita zvese zvatinogona kuti tione kuchengetedza chaiko kwenzou dzemuAfrica, zvipenyu zvakanyorwa pasi pemutemo weEngangered Species Act. The kuteverera, kudzingirira uye kuuraya mhuka dzekuvhima mhuka kunosemesa, uye isu hatifanire kusimudzira iyi indasitiri yakashata yekuvhima mukombe. Mhuka dzesango ndedze musango - hadzina kunangwa nekuuraiwa muzita revaraidzo. "
-Elizabeth Hogan, US Wildlife Campaign Manager, Kudzivirirwa Kwemhuka Dzepasi Pose